Window အဖွင့်မှာ Software တွေ Auto မတက်စေချင်ရင် ~ မျိုးကို
Window အဖွင့်မှာ Software တွေ Auto မတက်စေချင်ရင်
02:59 Technique, Window7No comments
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ကွန်ပျူတာ မှာ Software တွေ Run လာတာနဲ့ အမျှ ကွန်ပျူတာ စတင်ဖို့ ဖွင့်လိုက်ပီ ဆိုကတည်းက Window အတက် ဟာ အရမ်းကို နှေးလာစေတာကို သတိထားမိမှာပါ ...။ ဒါကြောင့် Window အတက်မှာ အချိန်တိုင်း ဆိုသလို မသုံးတဲ့ ၊ မလိုလားအပ်တဲ့ Software တွေ Auto Run ဖြစ်မနေစေဖို့ ကို ဒီနည်းလေး နဲ့ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ...။
1. Win Key + R ကို နှိပ်ပီး run box ကိုဖွင့်ပါ။ ပီးရင် msconfig လို့ ရိုက်ပီး OK လုပ်လိုက်ပါ ...။
2. ဒါဆိုရင်ဒီလို Window လေး တစ်ခု ရလာပီနော်..။ အဲဒီက Start up ဆိုတဲ့ Tag မှာ မလို အပ်တဲ့ Software တွေကို အမှန်ခြစ် ဖြုတ်ပီး Apply ၊ OK လိုက်ပါ..။
ဒါဆိုရင်တော့ အရင်ကထပ် ပိုမို မြန်ဆန်လာမှာပါ..။